G/ Beled-xawo “Ciidanka duulaanka nagu soo qaaday waxay rabeen Calanka Raaskambooni inay ka taagaan magaalada laakiin uma suuragelin” |
G/ Beled-xawo “Ciidanka duulaanka nagu soo qaaday waxay rabeen Calanka Raaskambooni inay ka taagaan magaalada laakiin uma suuragelin”
Warar dheeri ah ayaa laga helayaa Saraakiil Itoobiyaan ah oo maanta gaaray Degmada Beled-xaawo Maalmahaan ay ka taagnayd Xiisad u dhexeysay Ciidamada Dowladda Soomaaliya iyo Ciidamadda la sheegay inay ka amar qaataan Guddoomiyaha degmada Doolow C/rashiid Janan kuwaas oo ku Muransanaa Maamulka Degmada & hogaanka deegaanka .
Saraakiisha ka socotay AMISOM ayaa si gaar gaar ah ula Kulmay Saraakiisha hogaaminayso labada dhinac ee isku hayo Deg. B/xaawo , waxaana Salaadii Duhur kadib Markale Kulan Xasaasi ah uu ka furmay Saldhiga Booliska Deg. B/Xaawo , waxana kulankaan oo 3 Geesood ah ka qayb qaadanaayo darafyada isku hayo B/xaawo , Saraakiisha Itoobiyo & guurtida dhaqanka Walina kulanku wuu socdaa .
Guddoomiye ku xigeenka degmada Baladxaawo ee dawladda Soomaaliya Cadow Nuur Xasan oo wareysi gaar ah siinayay Shabakadda Warbaahinta Kismaayo24 Xafiiskeeda Muqdisho ayaa ku eedeeyay mamulka degmada Doolow inay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan magaalada inay uga taagaan waxa uu ugu yeeray Calanka Axmed Madoobe ee Raaskambooni,isagona xusay arintaasi maamulka degmada markii uu is hortaag ku sameeyay in C/rashiid uu Beledxaawo usoo diray Ciidamo hubaysan.
Wuxuu sheegay Guddoomiye Cadow dhibaatada ka jirta deegaanka inay salka ku hayso arinta Jubbooyinka ee Kismaayo wuxuuna eedayn kulul dusha uga tuuray maamulka degmada Doolow oo uu tilmaamay inay doonayaan magaalo uu ka jiro maamul inay xukun kusoo rogaan.
Xiisadaha ka dhex jira Doolow iyo Beledxaawo ayaa saamayn ballaaran ku yeeshay arimaha siyaasada ee deeganadaas, waxaana labadii maalin ee lasoo dhaafay soconayay qorshayaal looga hortagayo dhibaato ka dhacda deegaanadaas.